ट्रयाक टु डिप्लोमेसी की चिप्लोमेसी ? — OnlineDabali
ट्रयाक टु डिप्लोमेसी की चिप्लोमेसी ?
Posted on February 4, 2018 by अनलाइन डबली
सत्ता हस्तान्तरण, सरकार गठन, एमाले–माओवादी पार्टी एकता, प्रदेश सरकारको अभ्यास र गठनजस्ता मुद्दाहरु अहिले मिडियाका समाचार, प्रोपोगन्डा र ट्रयाक टु डिप्लोमेसी बनेका छन् भने आ–आफ्ना पक्षधारिता सामाजिक संजालमा देखिरहेका पनि छन् । कतिपय अवस्थामा त्यो आत्मघाती गोल बनेर चिप्लोमेसी पनि बनिदिँदो रहेछ । हेर्ने लाईक दृश्य, प्रदेश नम्वर २ मा राजपा–फोरमबीचको दन्तवन्जन र एमाले–माओवादीबीचको पार्टी एकता प्रसंग ।
यसैबीचमा सरोकारवालाका फेसबुक र ट्वीटर चर्चाका विषय बने, माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड सचिवालय सदस्यले लेखेको फेसबुकले उठेको चिया कपको तुफान । उनले एमाले सुप्रिमो केपी ओलीको महाकाली सन्धीदेखीकै फेहिरिस्त पेस गरे । पार्टी एकता संवेदनशील घडीमा पुगेको बेला के त्यो माओवादी सुप्रिमोको ट्रयाक टु डिप्लोमेसी थियो की ! लेखनदासको हृदयको आवाज … भन्ने बहस विषय भयो ।
अब मिडियाबारे कुरा गरौँ । युद्धमा व्ल्यांक फायर खोलेर दुश्मनको अवस्था चाल पाइन्छ भने संसदीय राजनीतिमा छम्द समाचार उरालेर बिरोधीको प्रतिकृया र अवस्था बुझिन्छ । अझ कुटनीतिमा पहिला जबरजस्ती हल्ला फिजाइन्छ, विरोधीको मनोवल तोडिन्छ । त्यसको लागि मिडिया शक्तिशाली हतियार हो ।
नेपालमा को राष्ट्रवादी ? को राष्ट्रघाती ? भन्ने पनि हल्ला खुब मच्चिइने गर्छ । अहिले अझ आग्रह, कुण्ठा, प्रतिसोध चरित्र हत्या र हिनताबोधका उपचार पनि मिडिया सामाग्री बनेका छन् । डिप्रेसको शिकार बनेका कतिपयलाई मनका भडस निकाल्ने थलो सामाजिक संजाल फेसबुक र ट्वीटर उपयोगी मञ्च बन्न पुगे र ट्रयाक टु डिप्लोमेसीको पनि शसक्त हतियार बन्यो ।
तर, भारतीय बिदेशमन्त्रीले नेपाली पक्षसँग परराष्ट्र र रक्षा जिम्मेवारी भारतलाई दिनुपर्छ भनेर भनिएको नेपाली पक्षसँगको आग्रह नेपालीपक्ष प्रतिक्षित प्रधानमन्त्री केपी ओली, किंग मेकर माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड र कामचलाउ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुनै प्रतिकृया नआएकोले अझ विषयले संसय पैदा गरायो । सतहमा आएका कुराको कुनै प्रतिक्रिया दिइदैन भने त्यो स्वीकारेका अर्थमा लिइन्छ । त्यसको यथोचित माग नेपालीपक्षसँग नेपाली जनताले माग्न ढिलाई गर्न हुँदैन ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक संजालबाटै एकहोरो जनसंवाद गर्छन् । त्यसैले समाचार, प्रोपोगन्डा, कुसमाचार, विज्ञापन, भ्रमित समाचार खुट्याउनै अहिले गारो परिरहेको छ । यि दुवै नेताले मिडयामा पोष्ट ट्रथलाई जमेर प्रयोग गरे ।
कतिपयलाई गाली गर्ने, मनका भडास निकाल्ने मञ्च बनेका छन् सामाजिक संजाल र अनलाइन । हामीलाई गाली गरेर हड्डी पनि खित खिताउने रोगै लागेको छ । हाम्रा आग्रहहरु राम्रालाई राम्रो नराम्रो भन्न अनुमतिनै दिँदैन । यो डिप्रेसनको लक्षण हो ।
आग्रही चिन्तन यस्तो मनोरोग हो…जो केही समय पहिला भजन गाउँनेहरु केही समयपछिनै गाली शास्त्रका पण्डित बनिदिन्छन् । अझ उनीहरुलाई आफैले लेखिएका स्तुतीगानका मसी सुकेको छैन् भन्ने हेक्का समेत हुँदैन । वौद्धिक वेश्यावृति र दास मानसिकता त दशकका सामाग्री अध्ययन गरेनै पुग्छ । त्यसैले मिडिया बुझ्न मिडिया चेतको आवश्यकता हुन्छ भने मिडियाको सबभन्दा ठूलो सम्पति भनेको विश्वसनियता हो । आजै विहानै माओवादी केन्द्र नजिकको एक अनलाइनले पार्टी एकता सम्पन्न,९,२७३ सदस्यीय समिति भनेर लेख्यो । क्यालेण्डर पल्टाई आज न अप्रिल फुल थियो, न गाईजात्रा । त्यस्तै प्रचण्ड सचिवालय सदस्यको पनि लेखिएको फेसबुक स्टाटस हटाई सके । प्रश्न के भनियो भन्ने होइन कुन हैसियतको कुन पात्रले कहाँ बसेर के बोल्यो भन्ने मात्र हो ।
वाक्कदिक्क भएपछि पनि मान्छे मनका कुरा फयास्स भनिदिन्छ । कहिलेकहीँ त्यस्ता कुरा नजिकका आफन्तबाट भनाइन्छ र प्रतिकृया हेरिन्छ । आधुनिक लडाइँका तरिका र रुपमा बुझन ट्रयाक टु डिप्लोमेसी र मिडियामा आउँने समाचार, कूसमाचार, प्रोपगण्डा, विज्ञापन समाचार खुट्याउन आवस्यक हुन्छ ।
ओली एकता भाड्नेहरुको घेरामा
क्रियटिभ एकेडेमी बन्यो ‘फष्ट डबली क्विज’को विजेता
जनमुक्ति सेनापछि ‘अयोग्य’ बन्‍ने पालो केन्द्रीय सदस्यहरुको ! २ सय मात्रै एमाले बन्‍न योग्य
मुक्तिनाथ मन्दिरको गोपनियतालाई मोदीले लगाइदिए धोती ! कठै ‘मुक्तिनाथ बाबा’
ओली ‘टोर्जन’ र लालबाबु सामूहिक बलात्कारी
सकियो भ्रमणः ओलीले मोदी पाए, मोदीले अरुण नदी पाए
मोदी भ्रमणबारे नेकपाका नेता रणवीरका ८ बुँदाः ओलीको नक्कली राष्ट्रवादको पर्दा च्यातियो